အခုခေတ် မြန်မာပြည်က လူငယ်အများစုဟာ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ကို မေ့နေကြပါပြီ ... ဘာမဟုတ်တဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ဆိုတာကို ...
သူတို့ ရင်ခုန်နေကြတယ် ...
ဖတ်ရှုခံစားအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျာ ...
Posted by Harry at 14:35
အရမ်းကောင်းတယ်အစ်ကိုရာ မြန်မာမိသားစုမှာလဲ တင်ပေးပါဦး ကျွန်တော်လဲ လူငယ်တစ်ယောက်ပေမဲ့
ဗယ်လင်တိုင်းကို သိပ်အရေးတယူ စိတ်ထဲမှာမရှိဘူး
ချစ်သူတွေပဲ သူတို့တွေ့ကြတဲ့ နေတိုင်းဟာ ချစ်သူ များနေ့ပဲပေါ့ ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့ကိုရော ပြည်ထောင် စုနေ့ကပါ မှေးမိန်နေပြီး ဘယ်ကလာမှန်းမသိတဲ့ နေ့ကိုအရေးတယူလုပ်နေတာကတော့ ........
တင်လိုက်ပြီ ညီလေးရေ ...
အဲဒီ ဗယ်လင်တိုင်းဒေး ဆိုတာက အနောက်ဓလေ့ကို ပုံတူ ကူးချတာပဲလေ .. ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ ဆိုင်တာမှ မဟုတ်တာ
အနောက်က ကောင်းတဲ့ ဓလေ့တွေ၊ အကျင့်စရိုက်တွေကျတော့ မယူကြဘူး ... ဥပမာ .. အချိန် လေးစားတာ၊ လူကို တန်ဖိုးထားတာ၊ အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထား လေးစားတာ ... အစရှိတာတွေပေါ့။
မဟုတ်တဲ့ အပျော်အပါးဆို သိပ်အတုခိုးမြန်ကြတာပဲ ...
ဦးဟယ်ရီ စိတ်တိုနေတာလား။ သဘာဝ ဟာ သဘာဝပါတဲ့။
အင်း..ဗယ်လင်တိုင်းဒေး သမိုင်းကို ခုမှသိတယ် ။ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်.. ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကျတော့ လူငယ်တွေမေ့နေလိုက်ကြတာ..
အရင်က မဖတ်ဖူးပဲ အခုမှ forward email ကနေဖတ်ဖူးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို ဖျောက်ထားတဲ့လူတွေကဖျောက်ထား၊ လူငယ်တွေလည်း စာဖတ်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာကြတယ်။
တကယ်တော့ Valentine's Day ကလည်း marketing လုပ်တဲ့လူတွေ အသုံးချခံနေရတာ...
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို မြန်မာကလေးများနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာ Blogger တွေ promote လုပ်ဖို့ကောင်းမယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ကဗျာလေးပါ ... ခုမှဖတ်မိပေမယ့် သဘောကျလွန်းလို့ ကွန်မန့်လာပေးတာပါ ...
သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါဗျာ.. ကဗျာအရေးသား စာပေအတွေးတွေက ကျယ်ပြန်သလို အမျိုးကိုချစ်တတ် တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆီက အဓိကနဲ့ သာမညနဲ့ ခွဲခြားစေချင်တဲ့ကဗျာလေးကို ဖတ်ရတာ.. သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာ... လေးစားပါတယ်..
forward mail တစ်ခုကနေဖတ်မိတာပါ။ သိပ်ကို အဓိပ္ဗါယ်ရှိပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျူးပစ်က ၉၅နှစ်ပြည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သရက်မှာ တင်ပေးပါလားဟင်။
ကိုဟယ်ရီက ဘာသာရေးထဲမှာပဲ နေတော့တာကိုး... မတွေ့တာကြာလို့ လိုက်ရှာလိုက်ရတာ...
a yan ta baw kya tae byar...Bo Gyoke ne pat tat lo mae nay kya pi..thanks
မိတ်ဆွေရ ခါချဉ်ကောင်မာန်ကြီး ပြီး တောင်ကြီးကိုဖြိုဖို့ကြံတော့ ဒေါ်စု ခမျာ အကျဉ်းကျနေပါပကောလား။
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း မပြောကြတာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုမေ့ပြီမတွေးလေနဲ့။
ရင်ခုန်သံစဉ်လေးတွေချိုအေးစဉ် အချစ်ရဲ့ အမှတ်တရ လေးတွေရှာတတ်တာ လူငယ်တိုင်းရဲ့ သဘာဝပဲလေ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ချစ်သူကိုချိန်းပြီးဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းပြောရမှာလား။
ချစ်သူများနေ့ ဆင်နွဲတာက အီတလီဖုန်းကြီးမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးတာမဟုတ်ဘူး အမေများနေ့ ပြီးတဲ့နောက် အဖေများနေ့ ရယ်လို့ ရှိသင့်လို့ သတ်မှတ်ပေးထားကြတာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဆင်နွဲကြတယ်မဟုတ်လား။ ချစ်သူတွေအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားနဲ့ နေ့လေးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ချစ်တတ်သူတွေနည်းတူ ငါတို့ရူးကြတာ ဘာဆန်းတုန်း။ အမှတ်တမဲ့မဟုတ်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ ခင်ဗျားချစ်တဲ့သူကို ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုလေးပေးကြည့်ပါ။
ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားဟာအသက်ကြီးရင့်သူ (သို့) မချစ်တတ်တဲ့သူ (သို့) နိုင်ငံရေးသမား (သို့) အတ္တ သမားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
လာရောက် ဖတ်ရှုအားပေးဝေဖန်သွားကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
စုချစ် ရေ ... မြန်မာကျူးပစ်မှာ တင်ပေးထားလိုက်ပါပြီ ....
Online Eleven Journal မှာ ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့လို့ တယောက်က တင်တောင်ပြီးနေပြီ ...
စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမြင်တမျိုးနဲ့ မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့ ကလေး ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
ဆက်ချစ်နိုင်ပါစေဗျာ ။ မျက်နှာဖြူကိုသခင် ခေါ်ရတဲ့ ဘ၀ကနေ ခုလို ပေါက်လွတ်ပဲစား အားလျားနေလို့ရတဲ့ ဘ၀ ရတာ ကျေးဇူးမမေ့သင့်ဘူးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ တမလွန် ဘ၀ တစ်ခုမှာ ရင်ကျိုးနေရှာမယ့်
ဗိုလ်ချုပ် ကိုတွေးပြီး သနားလို့ပါ။ ခင်ဗျားလိုချစ်တတ်သူတွေများများရှိ တော့ကောင်းတာ ပေါ့ဗျာ။ ဖွန်ကြောင်တွေ များတော့ ဘ၀ရည်မှန်းချက် မြင့်မြင့် ထားပြီးကြိုးစားတဲ့လူတွေအတွက် ပိုလွယ် သွားတာပေါ့။ ခံစားချက်ကို ဦးစာပေးတတ်သူ တော်တော် များများ ကိုတွေ့ဖူးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ချာတိတ်တွေပေါ့။ ခင်ဗျား နာမည် လိုပါပဲ ။
ကလေးပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ကလေးတွေပြောတဲ့ စကားကိုဗွေ မယူပါဘူး ။ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ကလေးကိုး.......
Anonymous နဲ့ပဲ ရေးပါရစေ။
ကလေး ပြောတာ တပိုင်းတစမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့ စော်ကားစရာမလိုဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
တဘက်က ပြောတော့လည်း စာရေးသူ အနေနဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကိုလည်း Negative ပုံစံနဲ့ ရေးစရာမလိုဘူးထင်တာပဲ။
အမှန်တကယ် ကျနော့ အမြင် ဖြစ်သင့်တာက။ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို ရေးချင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အကြောင်းရေးလိုက်ပါ။ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးနဲ့ တွဲပြီး ရေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်းပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို မေ့နေကြတာ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကြောင့် မဟုတ်သလို ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကြောင့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို ဘာမှ မထိခိုက်စေဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ Globalize ကြောင့် ဗယ်လင်တိုင်းဒေးက ခေတ်စားလာတာဟာ ခေတ်ရေးစီးကြောင်းလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေး ဆိုတဲ့ အသုံးကလည်း နည်းနည်းတော့ ပိုပိုသာသာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးက စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ အသုံးချမှု လို့ ကော်မန့်ပေးကြသလိုပါပဲ စာရေးသူကလည်း ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကို ဗိုလ်ချုပ်ကို အမွှန်းတင်ချင်လို့ ရေးသွားတာပါပဲ၊
ကျွန်တော်ဒီWEBSITE ကို ဘာလို့အခုမှသိရတာလဲလို့နောင်တရမိတယ်ဗျာ၊ ဒါတောင် သူငယ်ချင်းက ပြောပြလို့။
It'savery good poem. Thank you. I think everybody who love their country, religion, race would definitely can feel this poem.